အနုပညာလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ကားသစ်ကြီးဝယ်လိုက်တဲ့မေမြင့်မိုရ် | Buzz News
MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို ရရှိလာသူလေးကတော့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ ပီပြင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ နာမည်ကြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ” ပုဂံမြို့သူ ” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်း လူကြီးလူငယ်မရွေးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲများအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများလည်း. ရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်များဟာလည်း မေရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုရုံပေါ်ကိုအမြန်ရောက်ရှိရန် စောင့်မျှော်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ. ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေဟာ သူမစုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာကြေးများနဲ့ သိန်းရာကျော်တန်ကားသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့Facebook Myday လေးမှာလည်း ဝယ်ယူထားတဲ့ ကားသစ်ကြီးနဲ့အတူ ပုံလေးတင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မေ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Photo – May Myint Mo;CRD-MYANMARLOAD